Voice over Long-Term Evolution (VoLTE) ဆိုသည်မှာ ပုံမှန် ဖုန်းပြောဆိုဆက်သွယ်မူတွေလို 2G/3G နက်ဝပ်ပေါ်ကနေခေါ်ဆိုတာမျိူးမဟုတ်ပဲ ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမူတွေကို LTE နက်ဝပ်ပေါ်ကနေ ဆက်သွယ်မူတွေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
တယ်လီနော 4G +ကွန်ရက် မှာ ချိတ်ဆက်မှု အမြဲထာဝရရှိနေမှာပါ
ဆိုလိုတာကတော့ အသံ ခေါ်ဆိုမှုပြုနေတဲ့အချိန်/လက်ခံတဲ့အချိန်တွေမှာ 3G/2G ကွန်ရက်သို့ ပြန်လည်လျော့ကျ ရောက်ရှိသွားတာမျိုးရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ VoLTE စနစ်ကို သုံးစွဲမှုမရှိတဲ့ သာမန် 4G ဒေတာသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ကတော့ အသံ ခေါ်ဆိုမှုပြုနေတဲ့အချိန်/လက်ခံတဲ့အချိန်တွေမှာ 3G/2G ကွန်ရက်သို့ ပြန်လည်လျော့ကျရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ခေါ်ဆိုမှုကို အချိန်တိုအတွင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြုနိုင်တဲ့ အစီအမံ နှင့် ဘက်ထရီသက်တမ်း ပိုမိုကြာရှည်ခံခြင်း
ခေါ်ဆိုမှုတစ်ခုကို ပိုမိုတိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ ပြီးစီးအောင်ခေါ်ဆိုဆောင်ရွက်ပြုလုပ် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ခေါ်ဆိုမှုအမျိုးအစား ( ဥပမာ၊ VoLTE မှ VoLTE သို့၊ VoLTE မှ VoLTE အမျိုးအစားမဟုတ်သည့် သို့မဟုတ် VoLTE မှ ကြိုးဖုန်းသို့ ခေါ်ဆိုပြုလုပ်သည့်) ပေါ်တွင်မူတည်၍ VoLTE ကွန်ရက်သည် ကြာမြင့်အချိန် ၅-၈ စက္ကန့် အစား ၁-၄ စက္ကန့်ဖြင့် ပိုမိုနည်းပါး တိုတောင်းသည့် အချိန်အတွင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
ကြည်လင်ပြတ်သားမှု အလွန်တရာမြင့်မားလှတဲ့ အသံနဲ့ခေါ်ဆိုမှု
VoLTE ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် အသံကြည်လင်ပြတ် သားမှု အရည်အသွေးအားဖြင့် အလွန်မြင့်မားတဲ့ HD-quality အသံနဲ့ခေါ်ဆိုမှုကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
VoLTE ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးစွဲနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
ကိုယ့်ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းက VoLTE နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ သုံးလို့ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာကို ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ ?
(VoLTE ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိသုံးစွဲနိုင်ရန် လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ firmware အနေနဲ့ အနည်းဆုံး ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့လိုအပ်ချက် ကို စစ်ဆေးရန်) Check VoLTE compatibility
VoLTE ဝန်ဆောင်မှုကို အခမဲ့ ဘယ်လို ရယူ မလဲ?
မိမိတို့လက်ကိုင်ဖုန်းတွေရဲ့ ဆက်တင်ကို VoLTE ဝန်ဆောင်မှု အဖွင့်/အပိတ် (အတွက် ဘယ်လို ချိန်ညှိကြမလဲ။
အဆင့်-၁: ကိုယ့်ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းက VoLTE နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ သုံးလို့ရနိုင်မရနိုင်ဆိုတာကို ဘယ်လို သိရှိနိုင်မလဲ ?
Tab A7Lite
အဆင့်-၂ : '4G VoLTE calling VoLTE' ဝန်ဆောင်မှု ကို အသုံးပြုလိုပါက ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲ?
iOS အသုံးပြုသူများသည် အဆင့်၂ ကိုမလိုအပ်ပါ။ အဆင့်၃ သို့တိုက်ရိုက်သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
အဆင့်-၃: VoLTE ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်နှင့် ပယ်ဖျက်ရန် နည်းလမ်းများ
VoLTE အသံ/ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုမှုအတွက် နှုန်းထားသည် အသံပက်ကေ့ဝယ်ယူထားသူများအတွက် 2G/3G ခေါ်ဆိုမှု၏ နူန်းထားနှင့် အတူတူဖြစ်ပါသည်။ VoLTE ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုမှုသည် ပက်ကေ့ မဝယ်ထားသူများအတွက်မူ တစ်မိနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ် ကျသင့်ပါမည်။
VoLTE ဆိုတာ ပုံမှန် ဖုန်းပြောဆိုဆက်သွယ်မူတွေလို 2G/3G နက်ဝပ်ပေါ်ကနေခေါ်ဆိုတာမျိူးမဟုတ်ပဲ ဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုမူတွေကို LTE နက်ဝပ်ပေါ်ကနေ ဆက်သွယ်မူတွေပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ IMS နည်းပညာကိုအသုံးပြုပီး ဖုန်းခေါ်ဆိုမူ ‌တွေကို LTE နက်ဝပ်ပေါ်ကနေပြုလုပ်တဲ့အတွက်ပုံမှန် လက်ရှိ ဖုန်းခေါ်ဆိုမူတွေနဲ့မတူညီတဲ့အကျိူးကျေးဇူးတွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းတွေမှာ လက်ရှိ IOS ဆော့ဝဲလ် ဗားရှင်းကို ဘယ်လိုစစ်မလည်း ၊ IOS ဗားရှင်း ကိုဘယ်လို အဆင့်မြှင့်တင်မလဲ။
Setting ကိုသွားပါ >> General ကိုသွားပါ >> လက်ရှိIOS ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်းကိုစစ်ဆေးပါ
IOS ဗားရှင်းကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ ဗားရှင်း ၁၃.၃ အနည်းဆုံးဖြစ်ရပါမယ်။
Carrier Setting ထဲမှာ မိမိဖုန်းရဲ့ Carrier Bundle ဆော့ဝလ်ဗားရှင်းလေးက ၄၀.၁ ဖြစ်မဖြစ်စစ်‌ဆေးပါ။
Carrier Bundle ဆော့ဝလ်က တယ်လီနောမြန်မာ တွက်ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ။
Setting ကိုသွားပါ >> General ကိုသွားပါ >> About ကိုသွားပါ ပြီး Carrier ဆော့ဝဲလ် ကိုစစ်ဆေးပါ >> Carrier bundle ဆေ့ာဝလ် က တယ်လီနောမြန်မာ ၄၀.၁ ဖြစ်ရပါမယ်။
VoLTE ကို ဟန်းဆက်မှာဘယ်လို အဖွင့် အပိတ်ပြုလုပ်မလဲ။
Setting ကိုသွားပါ >> Cellular ကိုသွားပါ >> Cellular Data Options ကိုသွားပါ >> Voice & Data Options ထဲက 4G,VoLTE On ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး loading သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါမယ်။
VoLTE subscribed ပြုလုပ်ပီကြောင်းနဲ့ ဖုန်းကို restart ပြုလုပ်ဖို့ SMS ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းကို restart ချပီးတဲ့နောက်မှာ Setting ကိုသွားပါ >>Cellular ကိုသွားပါ >> Cellular Data Options ကိုသွားပါ >> Voice & Data Options ထဲက 4G,VoLTE On ဘေးမှာ အမှန်ခြစ်ကလေးတွေ့ပီဆိုရင် VoLTE စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
VoLTE ကိုဘယ်လို ပိတ်မလဲ။
Setting ကိုသွားပါ >> Cellular ကိုသွားပါ >> Cellular Data Options ကိုသွားပါ >> 4G, VoLTE Off ကိုရွေးချယ်ပါ။
iPhone တွေမှာ VoLTE video ခေါ်ဆိုမူတွေပြုလုပ်လို့ရပါသလား။
iPhone တွေမှာ VoLTE video ခေါ်ဆိုမူတွေမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
VoLTE ဖွင့်ပီးဖုန်းခေါ်ဆိုမူပြုလုပ်တဲ့အခါ ၊ 3G နက်ဝပ်ကိုပြန်ရောက်သွားပါသလား။
VoLTE ဖွင့်ပြီးဖုန်းခေါ်ဆိုမူပြုလုပ်တဲ့အခါ ၊ 3G နက်ဝပ်ကိုပြန်ပီးရောက်မသွားပါ။
VoLTE အသုံးပြုသူများ၏ အင်တာနက် ပက်ကေ့ချ် ကုန်ဆုံး သွားသော်လည်း VoLTE ဖုန်းခေါ်ဆိုမူဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပါလား။ VoLTEအသုံးပြုမူအတွက်ဘေဖြတ်တောက်မူကိုအင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်မှဖြတ်တောက်ပါလား။
VoLTE အသုံးပြုသူများ၏ အင်တာနက် ပက်ကေ့ချ် ကုန်ဆုံး သွားသော်လည်း VoLTE ဖုန်းခေါ်ဆိုမူဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ VoLTE အသုံးပြုမူအတွက် ဘေဖြတ်တောက်မူကို အင်တာနက်ပက်ကေ့ချ်မှဖြတ်တောက်ချင်းမပြုပါ။
VoLTE video ဖုန်းခေါ်ဆိုမူကိုမတူညီတဲ့တစ်ခြား Local အော်ပရေတာနက်ဝပ်ကိုခေါ်ဆိုမူပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
VoLTE video ဖုန်းခေါ်ဆိုမူကိုတစ်ခြား မတူညီတဲ့Local အော်ပရေတာနက်ဝပ်ကိုခေါ်ဆိုမူမပြုလုပ်နိုင်ပါ (အင်တာနေရှင်နယ်ဖုန်းခေါ်ဆိုမူအပါအဝင်)။ သို့သော် VoLTE voice ခေါ်ဆိုမူကို တစ်ခြားမတူညီတဲ့ Local အော်ပ‌ရေတာနက်ဝပ်ကိုခေါ်ဆိုမူပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။(အင်တာနေရှင်နယ် ဖုန်းခေါ်ဆိုမူအပါအဝင်)
VoLTE video /voice ဖုန်းခေါ်ဆိုမူကို နိုင်ငံပြင်ပတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
နိုင်ငံပြင်ပတွင်ခေါ်ဆိုမှုအတွက် အသေးစိတ်ကို “နိုင်ငံတကာသုံးဝန်ဆောင်မှု” စာမျက်နှာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
မေးမြန်းလိုသည့်မေးခွန်းအထက်၌မပါရှိလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ “တယ်လီနော မက်ဆင်ဂျာ သို့ တယ်လီနော‌ကောစင်တာသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။